NgoLwesihlanu, Februwari 21, 2014 NgoLwesihlanu, Februwari 21, 2014 Douglas Karr
Ukuba u-2013 ibingunyaka womxholo kunye nokuhamba, mhlawumbi kulo nyaka ngunyaka womxholo. Oko kukuthi, ukubeka umxholo emzimbeni phambi komsebenzisi ukuba uyifuna nini kwaye phi. Asithethi ngokukhangela kuphela, sithetha ngomyalezo wokutyhala kunye nokudityaniswa komntu wesithathu. Le infographic evela kwiNetbiscuits yenza oko kuqikelela. Ukwamkelwa kwe-Smartphone kuyaqhubeka nokwanda, kubonelela ngamandla e-geolocation kunye nokwanda kwenani lezixhobo ezixhumeneyo